Mogadishu Journal » Dowladda oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay Mudug
Mjournal :-Aroornimadii hore ee saakay ayaa waxaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay deegaan lagu Magacaabo ina Diideey oo ku yalla duleedka Bari ee degmada Afbarwaaqo,waxaana dagaalkaas ku geeriyooday in kabadan 15 ruux.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkaas,waxaana ay sheegtay in ay aad uga xun tahay,isla markaana loobaahan yahay in si deg deg ah lagu joojiyo,sida uu sheegay Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad.
“Dagaalka ka soo cusboonaaday Towfiiq iyo Afbarwaaqo waa arrin aan la aqbali karin”. Guddiga Nabadeynta iyo ciidanka xasilinta ee isku dhafka ah waa inay si degdeg ah u kala dhex galaan dadka walaalaha ah ee colaadu dhex martay.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaannada lagu dagaalamay ayaa waxaa ay sheegayaan in weli halkaasi colaada laga dareemayo,isla markaana markasta la filan karo in uu dagaal dhaco.